सिटीको १ सय गोल पूरा! | Hamro Khelkud
सिटीको १ सय गोल पूरा!
म्यानचेस्टर (एजेन्सी) – इंग्लिस प्रिमियर लिग क्लब म्यानचेस्टर सिटीले जारी सिजन १ सयगोल पूरा गरेको छ । युरोपको शीर्ष ५ लिगमा यो उपलब्धि हासिल गर्ने सिटी सिजनको पहिलो क्लब समेत बनेको छ ।
डिसेम्बर महिनामा दुई खेलमा पराजय भोगेपछि सिटी शीर्षस्थानको लिभरपुलभन्दा ४ अंकले पछाडी छ । सिटीले कमजोर प्रतिद्वन्द्वी क्रिस्टल प्यालेस र लेस्टर सिटीसँग हार बेहोरेको थियो । तर लगत्तै लय समातेको सिटीले पछिल्लो ४ खेलमा २२ गोल गरिसकेको छ ।
शनिबार हडर्सफिल्डविरुद्ध ड्यानीलोले लामो दुरीबाट गोल गर्दै अग्रता दिलाएपछि सिटीले गोलको शतक पूरा गरेको हो । त्यसै खेलमा रहिम स्टरलिङ र लेरोए सानेले पनि १-१ गोल थपे । जारी सिजन सिटीका लागि सर्जियो अगुएरो र ग्याब्रिएल जेससले १४-१४ गोल गरेका छन् । स्टरलिङले १२ गोल गर्दा सानेले ११ गोल गरिसकेका छन् । सिटीका लागि १७ फरक खेलाडीले गोल गरेका छन् ।
सिटीलाई ९० गोल गरेको पेरिस सेन्ट जर्मेन (पीएसजी) ले पछ्याईरहेको छ । स्पेनिस लिगको बार्सिलोनाले पनि ७८ गोल गरेको छ । सेभिल्ला ७१ र टोटेनहम हट्सपर ७० गोलसहित शीर्ष ५ मा अटाएका छन् । अघिल्ला सिजनमा वर्चस्व जमाउने रियल भने शीर्ष सुचिमा छैन ।